CFM-Papa: ” fanoitra ny fihavanana” | NewsMada
CFM-Papa: ” fanoitra ny fihavanana”
“Na ny Papa aza mahatsapa fa anisan’ny fanoitra amin’ny fampandrosoana ny fampihavanam-pirenena. Satria mitarika firaisankinam-pirenena ny fihavanana sy ny fampihavanana, mitarika fitoniana sy filaminana.”
Io no fanehoan-kevitry ny filohan’ny Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), i Maka Alphonse, taorian’ny fihaonan’ny Papa Fransoa tamin’ireo mpitondra fanjakana, firaisamonina sivily, masoivoho vahiny miasa sy monina eto Madagasikara, teny Iavoloha, ny faran’ny herinandro teo. Anisan’ny teny malagasy notenenin’ny Papa ny fihavanana, ary miangavy sy manainga ny Malagasy handray sy hahatsapa izay amin’ny fiainana andavanandro fa tsy resahina fotsiny.
“Hafatra miantefa ho an’ny vahoaka malagasy ireny, ho an’ny tompon’andraiki-panjakana, indrindra ho anay ato anatin’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy”, hoy izy. Mitaky andraikitra izany, ary misy adidy lehibe tsy maintsy atao hanamafisana ny fihavanana.
Fitaovana fototra ny politika
“Nataon’ny Malagasy izay hanamarihana ao amin’ny lalàmpanorenana toy ny tombokase ny iray amin’irao soatoavin’ny kolontsaina malagasy: ny fihavanana. Mampahatsiahy ny toe-tsain’ny fifampizarana izany, ny fifanampiana sy ny firaisankina.”
Izay kosa no anisan’ny hafatry ny Papa Fransoa momba ny fihavanana, raha tsiahivina. Raha tsy maintsy ekena sy omena lanja ary ankamamiana ity tany voatsodrano ity noho ny hatsarany sy ny harena voajananahary sy ny harena tsy hita pesimpesenina ananany, tsy azo amaivanina koa ny manome lanja an’ilay fanahy maha Malagasy izay manome anareo ny hery mba hiaro ny aina.
Hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny Fahaleovantena, naniry niaina ao anatin’ny filaminana sy ny fandriampahalemana izy. Koa niroso tamin’ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika tsy misy raorao, izay nanehoana ny fanajana ny fifamenoan’ny fomba fitantanana sy ireo vina. Mampiseho izany fa fitaovana fototra enti-manandrandra ny maha olom-pirenena sy ireo vina momba ny olombelona ny politika, rehefa iainana toy ny fanafahana ny ankohonambeny.